Soo saaraha Baakadaha dabacsan & Bacaha Baakadaha Cuntada Soo saaraha/Alaab-qeybiyaha | DQ BACK
Xirmada DQ - Soo saaraha baakadaha dabacsan oo diiradda saaraya warshadaha daabacaadda in ka badan 31 sano. Tel: + 86-18125839585 Iimayl:dqpack@danqing.net
Jeebka Jeebka Istaaga
Istaag Kiishashka Daloola ee Casiirka ah
Kiishka Istaagista ee Kraft
Afarta Seal Boorsada
Shandad Seal Seal ah
Kiish dib u celin
Filimada Baakadaha Daabacan
Filimka Barrier High ee Foomka duubista
Filimka Pvc Shrink Sleeve Film
Filimka Maroojin ee Xayawaanka ee Nacnaca
Duubista Filimka Baakadaha Daabacan
Filimka darajada cuntada
Pp, pvc, xayawaanka, filimaanta koobabka ee diirran
Bacda Gacan-ku-qaadka ee la gooyo
Kiishka Baakadaha ee Warshadaha
Bacaha Baakadaha Kafee/Shaaha
Bacda Baakadaha Raashinka Xoolaha
Kiishashka suufka nadaafadda
Kiishka Xidhmada budada saabuunta
Bacaha Baakadaha Cuntada
Bacaha Baakadaha Isqurxinta
Bacaha Miraha Cusub
Kiish Casiir ah
Bacaha Baakadaha Loogu Talagalay Buskudka Nacnaca Jalaatada
Shandad Baakadaha Popcorn
Baakadaha Qaxwaha & Shaaha
Baakadaha Cuntada Xayawaanka
Baakadaha Alaabta Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Isqurxinta
Baakadaha Cuntada fudud
DQ pack-dabacsan saaraha qashinka tan iyo 1991
Customization Service for taagan kor koley iyo bacaha baakadaha cuntada
TAAGAN UP kiish dareerka
boorso ay bacdu waxay leedahay faa'iidooyin cidhiidhi hawada, caddayn qoyaan iyo baxsiga lahayn. Waa wax ku ool ah iftiin ilaalin kartaa oo uu cimrigiinnu ku taariikhda uu dhacayo of badeecada ka.
TAAGAN UP kiish WITH jiinyeer
DQ baakada ku qalabeysan yahay 6 khadadka baakadaha iyo daabacaadda si toos ah, 4-xawaaraha sare ee khadadka dukumiintiyo dareeraha-free sare. Our habka wax soo saarka oo dhan waa la fuliyay iyada oo la raacayo shuruudaha ISO9001-2018 BRC.
Sida hoggaamineed asaaraha Baakadaha dabacsan, cunto saaraha bacaha baakooyinka, istaag alaab-kiish, DQ Pack waxaa diiradda daabacaadda warshadaha tan iyo sanadkii 1991.
Our habka wax soo saarka oo dhan waa la fuliyay iyada oo la raacayo shuruudaha ISO9001-2018.Iyo summad "DQ pack CN" waxa uu noqday magac fiican u yaqaan brand dayactirka meel keentay gudahood suuqyada gudaha ee dahaaray Baakadaha dabacsan iyo beero daabacaadda.
The bacaha Baakadaha dabacsan si ballaaran loo isticmaalo kafeega& Baakadaha shaaha, baakadaha cuntada, baakadaha sharaabka juice, baakadaha cuntada xayawaanka, iwm
Oomo Powder xirxirida beddelo
Butros Cuntada jiinyeer Bag
Istaag Up jiinyeer beddelo
bacda Cuntada jiinyeer
bac nacnac qaab Gaarka ah
Our Customization - Professional& hufan
Waxaan ku arzaaqnayna wax OEM&ODM saarta bacaha baakadaha cuntada iyo adeega Baakadaha dabacsan muddo 25 sano ah. Waxba ma ahan wixii shuruudaha yihiin, our ogaada-sida ballaaran iyo waayo-aragnimo idinku leeyahay natiijo lagu qanci karo. Waxaan saaray dadaal ugu in ay bixiyaan oo tayo fiican leh, adeeg qanacsan, qiimaha tartan rasmi ah, gaarsiinta waqtiga macaamiishayada qiimeeyo. Waxaan ka dhigi kara Xujooyin midabka adag oo ciyaarta wax soo saarka daabacaadda midabka final ka badan 98%. Haddii aad raadinayso waayo, caadadii bacaha baakadaha cuntada saarayaasha, istaag saaraha kiish ama saaraha Baakadaha dabacsan, Soo dhawaynaynaa in aad la xiriirto DQ baakada.
Production ama ganacsi ee wanaagsan ama adeegyada for sale
Trial Production& Xaqiijinta Sample
Waxaan ujeedadoodu tahay si ay u fahmaan baahiyahaaga si fiican si loo yareeyo khatarta mashruuca
Ayaa qorsheyneysa on aad
baako gelinta waxyaabaha aad
DQ PACK waxa ay qabataa falsafadeeda "siinta faa'iidooyinka shaqaalaha, qaadashada mas'uuliyadda bulshada", iyada oo ujeeddadeedu tahay in lagu dadaalo in ay noqoto kuwa ugu fiican
lammaane ka socda suuqa maxalliga ah ee macaamiisha caalamiga ah iyo alaab-qeybiyeyaasha.
Daboosha guud ahaan bedka dhulka la isticmaali karo oo dhan 35,000 mitir oo laba jibbaaran wuxuuna la imanayaa qalabaysan 6 baakad oo toos ah iyo khadadka daabacaadda, 4 horumarsan oo xawli sare leh oo aan dareere lahayn.
DQ PACK waxaa shahaado ka helay BV, FDA, SGS iyo GMC, iyo sidoo kale ISO9001-2018 nidaamka maaraynta tayada.
Waxaan bixinaa adeeg hal-joojin ah oo isku dhafan naqshadeynta, cabbirka, wax soo saarka, gaarsiinta, rakibaadda, iyo adeegga iibka kadib.
Xeerarka halbeega ee habka wax soo saarka adag, 18 milyan oo dalabyo ah oo ka yimid dalal shisheeye.
DQ PACK waxay bilowday go'aankeeda ah bixinta baakadaha dabacsan iyo xalalka daabacaadda ee 1991. Iyada oo ku saleysan Gobolka Guangdong, shirkadeena waxay ka badan tahay shaqaalaha 200 oo leh 30,000 mitir oo laba jibbaaran oo tas-hiilaad ah oo ku yaal Dongshanhu Industrial Park.
Aqoon-is-weydaarsigayada wax-soo-saarku wuxuu daboolayaa guud ahaan bedka dhulka la isticmaali karo oo dhan 35,000 mitir oo laba jibbaaran wuxuuna la yimaaddaa qalabaysan 6 baakad oo toos ah iyo khadadka daabacaadda, 4 horumarsan oo xawaarihiisa sare leh oo aan dareere lahayn. Nidaamkeena wax soo saarka oo dhan waxaa lagu fuliyaa si waafaqsan shuruudahaISO9001-2018, iyo summaddeenna "DQ PACK CN" waxay noqotay magac caan ah oo caan ah oo ilaalinaya booska hogaaminta gudaha suuqyada gudaha ee baakadaha dabacsan iyo meelaha daabacaadda. Iyada oo ah hormuudka baakadaha dabacsan ee leh dhoofinta iskeed u socota ee suuqa daabacaadda maxalliga ah, DQ PACK waxay laamo ka samaysay Malaysia iyo Hong Kong siday u kala horreeyaan.?
Xalka OEM caadadii, habayso baakayntaada.
200+ shaqaale shirkad ah, xirfadle R&Kooxda D.
Bedka warshadu waa 30000+ mitir oo laba jibbaaran.
100+ naqshadeeyayaasha iyo kooxda farsamada xirfadlayaasha ah.
Geedi socodka wax soo saarka oo dhan waxaa loo fuliyaa si waafaqsan shuruudaha ISO9001-2018, iyo summadayada ganacsiga "DQ PACK CN" waxay noqotay magac caan ah oo caan ah oo ilaalinaya booska hogaaminta gudaha suuqyada gudaha ee baakadaha dabacsan iyo beeraha daabacaadda.
Xafladda dhalashada shaqaalaha
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto alaabtayada ama adeegyadayada, xor u noqo inaad la xidhiidho kooxda adeegga macaamiisha. Sii khibrado gaar ah qof kasta oo ku lug leh calaamad. Waxaan kuu haynay qiimo door bid ah iyo alaab tayo wanaagsan leh.
Kadib qiimayn goobeed oo ay sameeyeen hay'adaha shahaado siinta ee aduunka hogaaminaya ee goobta jooga, DQ PACK waxa shahaado siiyay BV, FDA, SGS iyo GMC, iyo sidoo kale nidaamka maaraynta tayada ISO9001-2018.
Xiriirada: Ms Anna
Cinwaanka: Beerta warshadaha Dongshanhu, Degmada Chaoan, Magaalada Chaozhou, Guangdong, Shiinaha
Haddii aad wax su'aal ah qabtid, fadlan nala soo xiriir.
Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan nidhaahno adeeggayaga habaynta ayaa ka sarreeya.